Wonke umntu uyazi ukuba ubisi luyimveliso ebalulekileyo kwaye ibalulekileyo ekutheni ukutya kwabantwana. Iqukethe inani elikhulu lezinto eziyimfuneko ekuphuhlisweni nasekukhuleni kwabantwana, oko kukuthi: amafutha, amaminerali, amaprotheni, iivithamini kunye ne-carbohydrate. Kwaye ke abazali bazama ukuzisa iimvuthu zabo kwimveliso enomsebenzi. Kodwa akuyi kuthathelwa ingqalelo ukuba ubisi lweenkomo luyimveliso engqubuzanayo. Ngakolunye uhlangothi, akunjalo nakwiziintsana, ngakolunye uhlangothi luncedo kubantwana abadala. Kodwa eqinisweni ukususela kwisondlo ngunyaka wokuqala wobomi umntwana uya kuxhomekeka kwimpilo yakhe kunye nophuhliso.
Ngoko siqala nini ukunika abantwana ubisi? Lo mbuzo uvela kubazali abaninzi. Ngamanye amaxesha ibinzana litsholwa phambili ngaphambili kwiidolophana abantwana babondliwa ngobisi olutsha xa unina unenkathazo. Kodwa le ngxelo ayivumelani ncamvo nembono kaogqirha. Uninzi lwabahlengikazi besithi azinakwenzeka ukunika ubisi obupheleleyo kubantwana abangaphantsi kweminyaka elilodwa ubudala. Kwamanye amazwe kuvunyelwe ukuwunika ukususela kwiinyanga ezithoba, kunye naseJamani, umzekelo, oogqirha bakholelwa ukuba akufuneki ukuba abantwana banike ubisi lweenkomo de kube yiminyaka emibini. Ukuba unina unenkathazo yobisi lwebele, kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-fom ebizwa ngokuba yinkomfa yobusana, idibanise ngokuthe kancinci ubisi obuthile obukhethekileyo, okubhekiselele kwisinambiso kunye nokubunjwa kulungelelaniswa neempawu zentsana. Kule meko, simele siqwalasele ukuba abantwana base-year ubudala ukusebenzisa ubisi lweenkomo akufanele kudlule i-200 amagremu ngosuku kwaye kunikwe kuphela njengengxenye ye-porridges kunye namazambane ahlambulukileyo.
Kutheni inkomo yeenkomo ingafuneki kubantwana ukuya kunyaka:
Kuyo yonke inkomo yobisi, kukho ezininzi zamaminerali: i-calcium, i-sodium, i-phosphorus, i-chlorine, i-magnesium, i-potassium. Ziyakhazamisa umzimba womntwana, kwaye ngokukodwa i-system ye-urinary ayiyivelanga. Ngenxa yoko, iintso zeintsana zithwele i-20-30%, zenze ubisi lweenkomo.
Ubisi lweenkomo, kukho i-sodium kunye neprotheni eninzi kunokuba ubisi lwebele. Kule meko, iprotheni iyilwahluke ngokupheleleyo, enokubangela ukuba izimpendulo zenzeke. Abagulisi bezilwanyana bathi xa umntwana ebisiwe nobisi lweenkomo ukusuka kwiintsuku zokuqala zobomi, ke kunokwenzeka ukuba baninzi abantwana baya kuba neengxaki zokungabikho komzimba kubisi kunye nemveliso yobisi.
Ubisi kukho ininzi ye-casein.
Akukho okwaneleyo i-carbohydrate kuyo.
Ubisi luqukethe inani eliphantsi kakhulu lezinto ezibalulekileyo kumntwana: iodine, i-zinc, iivithamini C no-E, ubhedu.
Kukho ncinane kakhulu i-fatty acids (i-linolenic, i-linolenic), efunekayo ekuphuhlisweni kwengqondo, kunye ne-polyunsaturated fatty acids.
Ubisi lweenkomo, umxholo wesinyithi ophantsi. Ngokunjalo, isinyithi sisona sigxina esona sikhulu sokwandisa i-erythrocytes yomntwana okhulayo. Ngako oko, ukusilela kwayo kubangela ukungena kwe-anemia yesinyithi.
Ngokusebenzisa ubisi lweenkomo imihla ngemihla, iintsana zi no kuphuma kwamanzi, ubuninzi obuphezulu kwiminyaka eyi-6.
Ubisi aluqukethe zonke i-amino acid i-taurine kunye ne-cystine, i-folic acid, kwaye ziyimfuneko ekuphuhliseni umntwana.
Kwakhona, ukuqaliswa kokuqala kwenkomo yenkomo kubantwana kunokutya kwi-type 1 yeswekile yesifo sikashukela. Kubalulekile ukususa ubisi lweenkomo ngokusondeza isondlo sabantwana kuze kube yinyanga kulabo abanezigulane ezixhomekeke kwi-insulin kwintsapho yabo.
Ukukhethwa kobisi "akulula, kuba iimveliso zobisi zidlala indima ebalulekileyo kwondlo lomntwana. Xa ezi zinto ziveliswa ekudleni komntwana, kuxhomekeke kubazali, kodwa impilo kunye nophuhliso lomntwana ngokubanzi luxhomekeke kubo. Yingakho kufuneka uqikelele ngokucacileyo zonke iingxabano uze wenze isigqibo esilungile wena nomntwana wakho. Nangona kunjalo abazali banokuzithemba, ngamanye amaxesha kunesidingo ukuphulaphula enye imbono, ingakumbi kwiingcamango zoogqirha.
Ulawulo lokutya kwabantwana
Yinandi kwaye iyanceda: iindlela ezinhlanu zokutya kwabantwana
Iinzuzo zengqolowa ehlumekileyo kunye nokuchasene nokusetyenziswa kwayo
Ukunyangwa kwemihlathi kunye nezilwanyana zomntu
Iphupha lesiprofeto: inyaniso kunye neengcamango
Imithetho yokuzonwabisa ngentsapho
Iipencake ze-egg kunye nenyama
Isifo "sokukhathala" kwezigulane ze-adrenal: njani ukulwa?
I-inkukhu yenkukhu: umbane
Indlela yokwenza i-gradient kwiiphonkwane ezine-gel-varnish